Hub ka-dhigistii ilaahyada – Kaasho Maanka
Hub ka-dhigistii ilaahyada
W/Q: Ibnu Saynis
Xigmad aan u malaynayo inay asal ahaan Jarmal tahay ayaa waxay tidhaa “Meesha aqoontu ku dhamaato ayuu iimaanku ama aaminaaddo ka bilaabantaa”
Taasi oo macnaheedu yahay waxkasti oo aan garanwayno siday u shaqeeyaan ilaahyadeenna ayaan u tiirinnaa.
Tusaale ahaan danabka ama biriqda waxa keena iyo siday ku samaysanto dadkii hore may aqoon, taasi ayaa waxay sababtay inay diimuhu dhacdadaasi dabiiciga ah u adeegsadaan inay dadka ku cabsi galiyaan, tusaale Giriikii hore hilaaca waxay ku sheegeen hubka ilaaha Zeus lagu magacaabo.
Islaamku sidaa si la mid ah suurad dhan oo quraanka ka mid ah ayaa hillaac lagu magacaabay waxana suuradaa lagu sheegay “inuu biriqda ilaahay diro cidduu doonana ku dhufto”
“وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ”
Sidaa aad arkaysaan dadkii inaga horreeyay danabkii ama biriqdii ayay ka dhigeen hub ilaahyadu leeyihiin lkn ceebi waata dambaysee waxa ilaahyadii hubka dhigis lagu sameeyay markii la fahmay in hillaacu yahay uun koronto dabiici ah oo ka dhalata charge-kala-duwanaanshaha daruuraha iyo dhulka.
Intaas markii la ogaadayna waxa la soosaray aalad afka ingiriiska lagu yidhaa “Lighting rod” oo ah aalad biriqda/danabka guryaha iyo baaburta ama meel walba oon la rabin inuu danab ku dhaco ka qabata oo dhulka u gudbisa.
Sida sawirkan hoose ka muuqata qubbada masjidka rasuulka ee Madiina ayaad ku arki kartaa aalladan biriqda/danabka qabata taasoo muujinaysa kalsooni darrada jirta muslimiinta dhexdooda maadaama looga baqayo Allaah inuu gurigiisa ku khaldamo oo qabriga nabigiisa sharafta badan ee Maxamed gubo. Isaga oo hore u ballan qaaday inuu gurigiisa iyo dadka soo booqdaba ilaalinayo kana hor istaagi doona cadawga sida dhacday qisadii maroodiga ee nabiga soo saarkiisa ka horraysay.
Qof maskax furan marka loo sheego in uu jiro ilaah abuuray waxa ugu horreeya oo maskaxdiisa ku soo dhacaa waa in uu isweydiiyo cidda ilaahaas qofka abuuray laftiisa abuurtay. Wadaaddadu waxa ay sheegeen in markii ay qof isweydiintaasi ku soo dhacdo uu iska indhotiro, isla markaas waxa ay isla wadaaddadaasi sheegaan in aysan jiri karin wax iska abuurmay oo aan lahayn cid samaysay, taas oo uu...
Caddaalad darrada caaddilka!
Caddaaladdu waa miisaan dhinac la saaro wixii aad galabsatay dhinacna la saaro wixii lagaa goyn lahaa. Aadame iyo abuure, diin iyo falsafad, kuli way isku waafaqsanyihiin in inta miisaanku uu doc u janjeero oo waxaad galabsatay yartahay ama waxa lagaa gooyay badantahay meesha aysan caddaalad oolin.
Jirka insaanka ma ahan mid si la yaab leh u samaysan - waa ay jiraan xubno aynu uga wanaagsanyahay xayawaanka kale - laakiin sidoo kale, waxaa jira oo badan xubnaha ay xayawaanku inooga wanaagsanyihiin. Tusaale, aragga waa ay inooga wanaagsanyihiin xayawaanka badankii qaasatan gorgorka, halka qaarna ay ba awood u leeyihiin in ay mugdiga/gudcurka wax ku arkaan. Xawaaraha iyo orodka kuma gaarno...
Ma run baad rabtaa mise been?
Qaybta: Awood sare, Quraan
Diimaha caalamka laga haystaa dhammaantood waa khuraafaad dadka lagu dulleeyo oo uusan jirin ilaah ka danbeeya oo murti iyo aragti dheer leh, waxa aynu se isku koobaynaa diinta islaamka oo ah dhibaato weyn oo caalamka qaarkiis ku yuururta, caalamkaas oo ay soomaalidu ka mid tahay.
W/Q: Ibnu Saynis 3rd May 2020
Ilaaha ayay u gafeen